David Luiz oo rabo inuu sii joogo Arsenal - Somgoal
Home Premier league David Luiz oo rabo inuu sii joogo Arsenal
David Luiz ayaa ka yimid Chelsea samarkii hore isagoo kaga soo biiray Chelsea, sidoo kale Luiz ayaa u ciyaaray Arsenal 32 jeer isagoo rajeynaya inuu sii joogo kooxda ayadoo heshiiskiis uu ku egyahay 30 June 2020. ´´waa uu kuu faraxsanyahay Arsenal xiriir aad u fiican ayuu laleeyahay maamulka kooxda iyo dhamaan ciyaartoyda, wuu ixtiraamaa qof walbo´´ sidaas ayaa waxaa yiri wakiilka David Luiz.
Sidoo kale waxuu sheegay wakiilkiis inay suuragal tahay inuu sanad kale usii ciyaari karo Arsenal, Ayadoo Luiz uu rabo inuu kusoo gabagabeeyo waayihiisa ciyaareed heer sare ayaa rabay inuu helo heshiis 3sano markii uu Chelsea joogay ayadoo xeerka Chelsea u ogolaaneen. Luiz ayaa rajaynaya inuu fursad kale uu premier league kusii joogo heysto hadii ay Arsenal heshiiska sii dhamaanaya u dheereeyaan.
Luiz ayaa la fariisan doono Arsenal inta uu bilaaban xili ciyaaradkaan ayagoo ay ka wada hadli doonaan hadii uu sii joogayo ama hadii uu iskaga tagi doono kooxda. Luiz fursada uu heysto inuu sii joogo ayaa aad u sareeyo ayadoo la rajeynayo inuu xili ciyaareedka soo socdo sii joogi doono Arsenal.
Wakiilka Luiz ayaa sheegay in David uu sheegay inuu ku laaban doono kooxdiisa hore Benfica asagoo rajeynaya inuu kusoo gabagabeeyo waayihiisa ciyaareed halka uu kusoo bilaaway.
Previous articleHoryaalka Premier League ayaa dib loo bilaabi doono 17 juun.
Next articleLionel Messi oo si xur ah Barcelona ku macsalaamayn karo